737 winglets 1 afọ 7 ọnwa gara aga #1302
ohere ọ bụla ị nwere ike ịgbakwunye abụọ winglet / sharklets (aka elu na ala) n'elu ihe ntinye 737 ma ọ bụ mee 737 max. Ga-eme ka ahụmahụ ahụ bụrụ onye na-eji nlezianya!
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: jervan, Sea7212
737 winglets 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1320
Na mkparịta ụka mụ na IFly banyere ịgbanwe B737 NG na nke a, ha kwụsịrị n'eziokwu ahụ na na 2020 ha na-eme atụmatụ iwebata B737 MAX.
737 winglets 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1322
ọ bụ payware?
Ọ bụrụ na
737 winglets 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1323
Ee iFly bụ payware, mana ọ kwesịrị ya. Na-abụbu onye agha ụgbọ mmiri, m fega P-3 na C-9 Variants, m ga-ekwu na iFly payware na-enye ahụmịhe kachasị mma nke njirimara oyi na njiri ụgbọ elu. Kwesịrị ego iji nweta ezigbo ahụmịhe.
737 winglets 1 afọ 5 ọnwa gara aga #1347
ọ bụrụ na i chere iFly dị mma .... ị ga-anwale PMDG
N'eziokwu na ha abụghị ọnụ ala ... mana uru ọ bụla cent! Nanị 737, 747 na 777 m na-efe bụ PMDG
Oge ike page: 0.281 sekọnd